စျေးပေါသောအော်ဂဲနစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာ Rotary Drum စိစစ်စက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ။ | YiZheng
The Rotary စည်ဆန်ခါစက် အဓိကအားဖြင့်ပြန်လည်ရရှိသောပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ချောထုတ်ကုန်များကိုခွဲထုတ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးများသောစက်ကိရိယာဖြစ်သည်။ အဆုံးထုတ်ကုန်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။
Rotary Drum Sieving စက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Rotary စည်ဆန်ခါစက် အဓိကအားဖြင့်အချောထုတ်ကုန် (အမှုန့်သို့မဟုတ် granules) နှင့်ပြန်လာသည့်ပစ္စည်းခွဲခြားများအတွက်အသုံးပြုသည်နှင့်အချောထုတ်ကုန် (အမှုန့်သို့မဟုတ် granule) အညီအမျှခွဲခြားနိုင်အောင်, ထုတ်ကုန်များ၏အဆင့်အလိုက်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
၎င်းသည်အထူးသန့်ရှင်းသောပစ္စည်း - စစ်ဆေးသည့်ပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 300mm ထက်နည်းသောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောအစိုင်အခဲများကိုစစ်ဆေးရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်အနည်းငယ်သာရှိခြင်း၊ စစ်ဆေးနိုင်သည့်စွမ်းရည်သည်တစ်နာရီလျှင် ၆၀ တန်မှ ၁၀၀၀ တန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုတွင်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်ကိုရှင်းလင်းခြင်း Rotary စည်ဆန်ခါစက် ဂီယာအုံအမျိုးအစား deceleration စနစ်မှတဆင့်ပစ္စည်းကိရိယာများစင်တာခွဲခြာဆလင်ဒါ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လည်ပတ်လုပ်ဆောင်တယ်။ ဗဟိုခွဲခြမ်းမှုဆလင်ဒါအများအပြား annular ပြားချပ်ချပ်သံမဏိကွင်း၏ရေးစပ်တဲ့မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုခွဲခြာဆလင်ဒါမြေပြင်လေယာဉ်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါရှိုပြည်နယ်မှာတော့ပစ္စည်းအလုပ်လုပ်လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းဗဟိုခွဲခြာဆလင်ဒါ၏အထက်အဆုံးကနေဆလင်ဒါပိုက်ကွန်ထဲသို့ဝင်။ ခွဲထုတ်ဆလင်ဒါ၏လည်ပတ်နေစဉ်, ဒဏ်ငွေပစ္စည်း annular ပြားချပ်ချပ်သံမဏိ၏ရေးစပ်မျက်နှာပြင်ကြားကာလမှတဆင့်ထိပ်ကနေအောက်ခြေမှကွဲကွာနေသည်နှင့်ကြမ်းပစ္စည်းခွဲခြာဆလင်ဒါ၏အနိမ့်ဆုံးကနေကွဲကွာခြင်းနှင့်သို့သယ်ဆောင်လိမ့်မည် ကြိတ်ခွဲစက်။ r ကိရိယာတွင်ပန်းကန်အမျိုးအစားအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးယန္တရားတပ်ဆင်ထားသည်။ ခွဲထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမျက်နှာပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးယန္တရားနှင့်ဆန်ခါခန္ဓာကိုယ်၏ရွေ့လျားမှုမှတဆင့်သန့်ရှင်းရေးယန္တရားကစဉ်ဆက်မပြတ်“ လောင်ကျွမ်း” သည်၊ ထို့ကြောင့်ဆန်ခါကိုယ်ခန္ဓာသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးသန့်ရှင်းသွားသည်။ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်၏ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Rotary Drum Sieving စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ
1. မြင့်မားသောစိစစ်ထိရောက်မှု။ ပစ္စည်းကိရိယာတွင်ပန်းကန်သန့်ရှင်းရေးယန္တရားရှိပြီးသောကြောင့်၎င်းသည်စက်၏မျက်နှာပြင်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးမျက်နှာပြင်ကိုဘယ်တော့မျှပိတ်ဆို့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၂ ။ စိစစ်မှုယန္တရားတစ်ခုလုံးသည်တံဆိပ်ခတ်ထားသောဖုန်မှုန့်အဖုံးတွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးမျက်နှာပြင်အတွင်းရှိဖုန်မှုန့်များပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သည်။
3. ပစ္စည်းကိရိယာ၏ဆူညံသံနိမ့်။ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းပစ္စည်းမှထွက်ပေါ်လာသောဆူညံသံနှင့်အလှည့်မျက်နှာပြင်သည်တံဆိပ်ခတ်ထားသောဖုန်မှုန့်အဖုံးများနှင့်လုံးဝသီးခြားဖြစ်နေပြီး၎င်းသည်ပစ္စည်းကိရိယာဆူညံသံကိုလျော့နည်းစေသည်။
4. အဆင်ပြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ ဤစက်ကိရိယာများသည်ဖုန်မှုန့်အဖုံး၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရှိသောပစ္စည်းလေ့လာရေး ၀ င်းဒိုးကိုတံဆိပ်ခတ်ထားပြီး ၀ န်ထမ်းများကစက်ကိရိယာ၏လည်ပတ်မှုကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတွေ့နိုင်သည်။
5.Long ဝန်ဆောင်မှုဘဝ။ ဒီပစ္စည်းကိရိယာမျက်နှာပြင်ကို annular ပြားချပ်ချပ်များစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်၊ ၄ င်းရဲ့ဖြတ်ပိုင်းareaရိယာဟာအခြားခွဲထုတ်ကိရိယာများရဲ့မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်အကျယ်ထက်အများကြီးပိုကြီးတယ်။
Rotary Drum Sieving စက်ဗီဒီယိုပြသခြင်း
Rotary Drum ဆန်ခါစက်မော်ဒယ်လ်ရွေးချယ်ခြင်း
အလှည့်အပြောင်း (r / min)
ရှေ့သို့ ကောင်တာ Flow Cooling Machine
နောက်တစ်ခု: linear တုန်ခါမှု Screener
နိဒါန်း Organic & Compound Fertilizer Granulator စက်အမျိုးအစားသစ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ New Organic & Compound Fertilizer Granulator စက်သည်ဆလင်ဒါရှိမြန်နှုန်းမြင့်လှည့်စက်လည်ပတ်စွမ်းအားမှထုတ်လွှတ်သောလေခွင်းအားအားကိုအသုံးပြုသည်။